Cristiano Ronaldo, Owen, Torres, Drogba, Rooney iyo Aguero dhammaan way ku fashilmeen arrinkan laakiin xiddig yarahan reer England….! – Gool FM
Cristiano Ronaldo, Owen, Torres, Drogba, Rooney iyo Aguero dhammaan way ku fashilmeen arrinkan laakiin xiddig yarahan reer England….!
Byare April 5, 2016
(England) 05 Abriil 2016. Dhaliyaha reer England ee kooxda Tottenham Harry Kane ayaa ku raaxeysanaya xilli ciyaareed kale oo aan innaba caadi ahayn iydoo ay kooxdiisu ku tartameyso hanashada horyaalka Premier League.
Laakiin inkastoo ay naadigiisu 7-dhibcood ka hooseyso hogaamiyayaasha la loodin la’yahay ee Leicester City kuma eedeyn kartid midaa Kane.
Marka intaa oo dhan laga soo gudbo dhaliyaha Tottenham ayaa dhaliyay 22-gool 32-dii kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan, saddex gool in dheer weeraryahanka Foxes ee Jamie Vardy, isagoona dab galiyay gool dhalintiisa aan innaba caadiga ahayn 21-gool ee xilli ciyaareedkii tagay.
Kal ciyaareedka qeyrul caadiga ah ee Kane gaar ahaan midkan ayaa waxay tusineysaa inuu gaaray 20-gool iyo kabadan labadii xilli ciyaareed uu si buuxda ugu ciyaaray Tottenham.
Laakiin horyaalka Premier League oo marti galiyay weeraryahano aad u shidan sida Owen, Aguero, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Wayne Rooney iyo Fernando Torres marna ma sameyn sidii uu sameeyay Kane oo way ku guul darreysteen inay labo xilli ciyaareed oo isku xiga dhaliyaan 20-gool amaba ka badan.
EEG KALA HOREYNTA: Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u hayn lahayd horyaalka Premier League haddii...